Maitiro ekuisa maNetbeans pane yedu Gnu / Linux kugovera | Linux Vakapindwa muropa
Parizvino pane akawanda Mahara Software zvishandiso izvo zvinotibvumidza isu kuti tiwane zvehunyanzvi mhedzisiro pazvakange zvisingaite kare. Imwe yeaya maturusi anotibvumira kuti tigadzire mapurogiramu nemaapplication anonzi Netbeans, inozivikanwa kwazvo uye yakakwana kwazvo IDE izvo hazvizongotibatsire chete kugadzira nharembozha asi isu zvakare tichakwanisa kugadzira mawebhusaiti, C ++ zvirongwa uye webhu kunyorera.
Netbeans ndeye yakazara kwazvo software asi kuisirwa kwayo hakusi nyore sezvazvinoratidzika uye kunogona kunetsa kana iwe usingazive ese matanho anofanirwa kutorwa pakuiswa kwayo. Tevere tinokuudza iwe maitiro ekuisa maNetbeans pane chero kupi kweGnu / Linux kugovera.
Iwo epamutemo marekodhi ezvizhinji zvekuparadzirwa kweGNU / Linux atove neNetbeans, asi pamwe ivo havaise yakazara yakazara kana ivo havaise iyo yazvino vhezheni vhezheni. Ndokusaka tiri kuzoshandisa iyo yekuisa package iyo yakaburitswa mu iyo yepamutemo webhusaiti yeSoftware.
Kune akatiwandei mavhezheni eNetbeans, idzi shanduro Idzo dzakaderedzwa shanduro dzeIDE dzinosiyana zvichienderana nemutauro wechirongwa watinoda kushandisa. Iwe pachako, ndinokurudzira kuti utore pasuru yakazara nerutsigiro rweyese mitauro yekuronga. Kana isu tichirodha pasi yekuisa pasuru isu tinovhura chinongedzo mufaira mune irikutorwa pasuru uye tinonyora zvinotevera:
sudo sh ./ netbeans-8.2-linux.sh
Mushure meizvi, kumisikidzwa kweIDE kuchazotanga mukuparadzirwa kwedu kweGnu / Linux. Kana tisina "sudo", isu tinofanirwa kuchitsiva nechero rairo inoshanda seye superuser kana maneja. Usati waisa iyi IDE zvinokurudzirwa kuisa software yeJava mugove, software inogona kunge isu tese tinayo asi inogona kukonzeresa matambudziko kana tikasika zvishandiso tisina iyi software yakaiswa pakombuta yedu.
Maitiro acho ari nyore uye anogona kukurumidza kana tikatevera matanho aya. Zvakare, kusiyana nemamwe maIDE iyo yekumisikidza inoshanda kune chero Gnu / Linux kugovera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekuisa maNetbeans pane yedu Gnu / Linux kugovera
Uye pandinoda kumutsiridza maNetbeans ndinofanira kurodha pasi pasuru nyowani ndoita maitiro zvekare?
Ini handizive kuti nei mu debian 10 isingandiitire chinhu, ini ndinoisa macode uye anoramba akamira
Uku ndiko kugovera kunokurudzirwa neFSF